ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ | Shann Parliament
ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
12/12/2019 - 18:05
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၁
ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီအခန်း(၆)၌ ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ အထူးအစည်းအဝေးနှင့် အရေးပေါ် အစည်းအဝေးများအပါအဝင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များက တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆို၊ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဖြေကြားခဲ့မှုအပေါ် ကတိကဝတ်ဖြစ်ပေါ်မှုများကို စိစစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်သူနှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်လျက်ရှိပြီး အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
date for calender:
Thursday, December 12, 2019 - 17:45
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၈ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အစီအစဉ် လျာထားချက်
ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ကိန်းဂဏန်းအခြေပြုသုတေသနစာတမ်းတို အမှတ်(၂)
Contact US. Shann Hluttaw
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံး
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ရုံး
© 2018 ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်. All rights reserved. Developed by MMcities Organized By Laser World .